लिप टैटू - सर्वश्रेष्ठ 24 लिप टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
लिप टैटू - सर्वश्रेष्ठ 24 लिप टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु
sonitattoo अगस्ट 26, 2016
के तपाइँ पहिले एक होंठ टटू देख्नुहुन्छ? खैर, यदि तपाइँले देख्न सक्नुभएन भने, शायद, यो प्यारा लिपटो ट्याटटोस धेरै धेरै हेर्नको लागी समय हो। यो टैटू केवल बहादुर हृदयहरूका लागि हो जुन एक कहानी बताउन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ कि कसैले पनि टैटूको माध्यमबाट कहिल्यै भनेन।
लिपटा टटटो अर्थ
होंठ प्रायः महिलाहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ को लागी अंतरंग र अपमानजनक क्रियाकलापको बारेमा कुरा गर्न। यो विभिन्न रंग, जुनून वा ढाँचामा चित्रित हुन सक्छ। रातो हड्डी चुम्बन र यौन अपीलको बारेमा कुराकानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जब यो इलाकामा पेट, हिप्स, गर्दन, आदि जस्ता अंतरजातीय छ। यो शरीरको धेरै क्षेत्रमा चित्रित हुन सक्छ जसले चुम्बनलाई प्रभाव पार्नेछ। जिब्रोको साथ आउँने रातो ओठहरू आविष्कारवादसँग सम्बन्धित हुन सकिन्छ। रातो रङ्गहरू कामुक र कामुक विषयहरूको बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै ट्याबू विषयवस्तुहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् जुन तपाईं यसको साथ सम्बद्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
जब मुख खोलिएको छ, यो counterculture को बारे मा कुरा गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिङ प्रतिनिधित्व गर्न ओठहरू प्रयोग गरिन्छ। मान्छेहरू रोमान्टिक प्रतीकमा चित्रण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ आफ्नो रोमान्स प्रदर्शन गर्न वा अर्को स्तरमा यसलाई कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, होंठ प्रयोग गर्न तपाईँको कथा बताउन सकिन्छ।
तपाईंको # लिपट टटूको स्थानले कस्तो सुन्दरता र लागतलाई प्रभाव पार्छ। तपाईं जहाँ आफ्नो डिजाइन मसी स्याङ्जा जाँदै हुनुहुन्छ ठाउँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ क्षेत्रहरू जहाँ यो गाह्रो हुन सक्छ जहाँ तपाईंको होंठ टैटू आकर्षित गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
अति उत्तम होंठ टटू
शरीरको एक संवेदनशील भाग पनि एक ठाउँ हो जहाँ होंठ टैटू महंगा हुन सक्छ र धेरै समय लाग्छ।
यार हड्डी टटू
जेनेटिटल, खुट्टा, गर्दन र हात शरीरको सबैभन्दा धेरै संवेदनशील भागहरू छन् जुन तपाईंको टटू राख्न सकिन्छ।
होंठ # टटूटो डिजाइन सरल वा जटिल हुन सक्छ जुन तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईं पनि आफ्नो होंठ टैटू अनुकूलित गर्न को लागी राम्रो हेर्न को लागी अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्यारा होंठ टैटू
तपाईंले बिर्सनु हुँदैन कि पार्लरको स्थान अत्यावश्यक छ। तपाईंको होंठ टैटू को लागत धेरै प्रभावित हुनेछ।
Girly lips tattoo
धनी सडक र शहरहरूमा अवस्थित पार्लरहरू अन्य भागहरूमा अवस्थित तुलनामा अधिक महंगी हुने छ। कलाकारहरू जान्दछन् कि ती व्यक्तिहरू जुनसुकै स्थानहरूमा रहन बाध्य हुन्छन् र अधिक खर्च गर्छन् र उनीहरूले बढी चार्ज गर्छन्।
मुस्कुराउँदै हड्डी टटुट
जब तपाईं यो होंठ टैटू प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो अनुसन्धान राम्रोसँग गर्नुभयो। धेरै मानिसहरू क्रस सडकमा छन् किनकि उनि कलाकारको गल्तीको कारण उनीहरूको सपनाको होंठ टैटू गर्न असमर्थ थिए।
शब्द होंठ टैटू
मान्छे अब पेशेवरहरु लाई प्रयोग गरेर यो होंठ टैटू प्राप्त गर्न को लागी छ कि उनि चाहते हो।
खोपड़ी होंठ टटू
यसो भन्दै कुनै झूटो कुरा होइन कि होंठ टैटू संसारभरका पुरुष र महिलाहरूको अत्यावश्यक पहिचान भएको छ।
हामी धेरै व्यक्तिहरू अघिल्लो दश भन्दा बढी लिपटोटहरूको साथमा रचनात्मकताको कारण हो जुन होंठ टैटू संग हुन्छ।
स्वाद र व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू दुईवटा कारकहरू छन् जुन तपाईले चयन गर्न सक्नुहुने लिपटे ट्याटको प्रकारलाई प्रभाव पार्छ। लागत केहि छ कि मानिसहरु पहिलो पटक बिस्तारै जाने को लागी विचार गर्दछन्। यदि तपाईं यो होंठ ट्याट्ट खर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने, यसलाई प्राप्त गर्न राम्रो विकल्प हुन सक्छ। तपाईंले ओठमा मनपर्ने केहि लेख्न सक्नुहुन्छ
लिप टैटू फैशन र उपसाधन मध्ये एक हो जसको हामी पुरुष र महिलाहरु को शरीर मा देख्छौं। होईन दिनहरू होंठ टटुट गर्दा ट्याक्सीको रूपमा मानिन्छ। सारा संसारमा, मानिसहरू सुन्दरता र सन्देशलाई लिपटेको ट्याटुटोहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन सन्देश आउन थाले। छवि स्रोत
उदाहरणका लागि लिनुहोस्, कसरी त्यस्तो मनपर्ने लिपटे टटुट बनाउने? यो एक होंठ टैटू छ कि वर्षहरु मा एक प्रवृति भएको छ। हामीमध्ये धेरैले अचम्मलाग्दो कलाकार्यहरूको प्रशंसा गरेका छौ जुन हामीले हाम्रा शरीरका विभिन्न भागहरूमा हाल, अतीत र भविष्य पनि सम्झिनेछौं। छवि स्रोत
टटू को कला एक पुरानो कला प्रपत्र हो जुन मानव द्वारा सोचेको छ। यो कलाको लागि के प्रयोग गरिएको आधारमा अभिव्यक्ति वा विद्रोही कार्यको रूप हो। त्यहाँ पनि आभूषण को रूप को रूप मा टैटू को उपयोग गर्ने मान्छे हो। छवि स्रोत
खतरा लिप Tattoos
त्यहाँ एक समय थियो जब ट्याटोहरू जादुई प्रतीकको रूपमा मानिन्छ र प्रजनन, पवित्रता, विश्वास र धेरै अधिक कुरा बारे कुरा गर्न प्रयोग गरिएको थियो। तथापि, गएका दिनहरू टाट सामान्य भए किनकि हामी टैटूबाट धेरै गहिरो अर्थ देख्यौं। छवि स्रोत
विशेष लिपटे ट्याटू
एक ट्याटू # जस्तै यो अनदेखी गर्न सकिदैन। सुन्दरता र प्रभाव यो पहनेले मा बनाउँछ ऊ ठूलो बोल्छ। छवि स्रोत
प्रेमिका लिप टैटू
एक समय आउँछ जब तपाईं टटू संग आफ्नो अलर्ट बाहिर जान तयार हुनुहुन्छ। एक ट्याटूसँग धेरै चीजहरू छन् जसले तपाईंलाई हामीलाई चित्रण गरेको अर्थको कारणले। तपाईले गर्नु पर्छ सबै भन्दा राम्रो एक जस्तै यो छ। छवि स्रोत
शीर्ष देवियों लिप टैटू
शक्ति लिपटे ट्याटू
यी दिनहरू टिपोहरू एकदमै सामान्य हुन्छन् कि हामी यसलाई चार जना व्यक्तिमा लगभग एक मा देख्छौं। लिप टैटूहरू कला कार्यहरू हुन् जुन धेरै चीजहरू प्रतिनिधित्व गर्नका लागि प्रयोग गरिएका छन् र मानिसहरूबारे कुरा गर्छन्। छवि स्रोत
शक्तिशाली लिपटे ट्याटू
धेरै व्यक्तिहरू लाई होंठ टैटूहरू पश्चात्ताप गर्दछन् किनभने तिनीहरू यसको लागि खेल्दैनन्। छवि स्रोत
लिपटे ट्याट्ट मिलान
एक होंठ टैटू को सौन्दर्य मात्र सराहना गर्न सकिन्छ जब यो तपाईं मा सख्त स्याही छ। शरीर को भाग जहाँ तपाईं होंठ टैटू को आवश्यकता छ। छवि स्रोत
यो किनभने तपाईं या त लुकाउन वा यसलाई हेर्नको लागी संसारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। छवि स्रोत
सबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूप्यारा टैटूहरूहेनना टैटूसंगीत टैटूहरूएंकर टैटूहरूदूत टैटूहात्ती टटूरिप टैटूहात ट्याटोसआँखा टटूकमल फूल टटूहृदय टटटोछाती टैटूहरूहीरे टैटूबहिनी टैटूहरूगर्दन टैटूहरूतितली टैटूहरूFeather Tattooतीर टटूटैटू विचारहरूकम्पास टैटूपक्षी टैटूहरूअनन्तता टटूआस्तीन टैटूहरूयुगल टैटूहरूपुरुषहरूको लागि टैटूपैट टैटूज्यामितीय ट्याटुहरूक्राउन टैटूहरूबिस्कुट टटूसिंह टटटोहरूफिर्ता ट्याटोहरूगुलाब टैटूहरूक्रस टैटूआदिवासी टैटूहरूराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूसूर्य टैटूहरूफूल टैटूहरूचन्द्र टोटोटोबिल्ली ट्याटोkoi fish tattooओटोपस ट्याटूचेरी खिलौना टैटूहात टाटाटोसट्याटुहरू केटीहरूको लागिटखने टैटूईगल ट्याटोwatercolor टटूmehndi डिजाइनप्यार टैटू